I-Semalt Expert Ixela iKamva ye-Web Scraping
I-Web scraping iyindlela eqhelekileyo yokuqokelela idatha esuka kumnatha. Ukuthi kubaluleke kakhulu ukuxhomekeka okukhulu. Kubaluleke kakhulu. Ulwazi lunamandla, kwaye nayiphi na inhlangano engabikhoyo iphosakeleyo, ngoko ukukhwa kwewebhu ligazi apho zonke iintlobo zamashishini asekhompyutheni ziqhuba.
Ingaba yiNGO, inhlangano eyenza inzuzo, ukuqalisa, ishishini eliphakathi, okanye iqela le-Fortune 500, ngokuqinisekileyo lihamba ngokuqokelela ulwazi. Ngoko, ukubaluleka kwe-web scraping ayikwazi ukugxininiswa.
Ukhuphiswano kwihlabathi lenkampani alizange lithande ngakumbi kunoko ngoku. Abadlali kumashishini ahlukeneyo ngoku basebenzisa izixhobo zonke ezikhuselweyo zabo ukukhuphisana. Kungekudala, imibutho yaqala ukusebenzisa i-web ukukhahlela njengezixhobo zokulwa nabakhuphiswano. Emva koko, xa unolwazi olufanelekileyo kunabo abachasayo, uya kuba nethuba phezu kwabo. Ulwazi, bathi, amandla. Nangona i-web scraping industry igcwele izisombululo ezininzi, zinokuthi ziqokelelwe kwiindidi ezi-3 kuphela, kwaye ziyizi:
Ukwakha isicelo sakho sokukhutshwa kwedatha okanye isofthiwe ngokwakho okanye ngokuqeshisa abaprogram
Ukuya kwiinkonzo ze-web scraping services
Ukuthenga isofthiwe ye-extraction software
Zonke izicombululo zintathu zineenzuzo kunye nezibi. Ngaphandle koko, isigaba sesisombululo esifanelekileyo naliphi na inkampani inokuxhomekeke kwiimfuno zewebhu zokutshiza.
Njengazo zonke i-teknoloji, ukuhlulwa kwewebhu kuya kuqhubeka ukuphuhlisa nokuguquka. Ngoko, eli nqaku ligxininise kwikamva lewebhu. Ngaphambi kokuhamba phambili, kubalulekile ukucacisa ukuba izimvo eziphakanyisiwe kweli nqaku malunga nekamva le-web scraping ziphela nje. Ukubeka engqondweni, apha, ikusasa le le-extraction web libhekwa kwiindlela ezahlukileyo.
Ukususela kwiimbono zobulumko
Njengoko ingqiqo yolwazi isetyenziswe kuwo onke amacandelo obomi, kukholelwa ukuba iteknoloji iya kusetyenziswa ngokugqithiseleyo kwi-web scraping kwikamva elisondeleyo. Ngamanye amazwi, ii-robot ezichanekileyo okanye oomatshini baya kudalwa ukuze bajonge kwaye bachane idatha rhoqo kwiinkampani ezahlukeneyo.
Kakade, iirobhothi sele zisetyenziselwa ukutshitshiswa kwewebhu, kodwa akukho nanye kubo onokusingatha utshintsho olukhulu kwiiwebhu ezijoliswe ngaphandle kokungenelela kwabantu. Ngokomzekelo, ukuba ukulungiswa kwesayithi ekujoliswe kuyo, utshintsho olukhoyo (ii) zixhobo aziyi kukwazi ukutshatyalalisa isayithi ngaphandle kokuba umsebenzisi ahlenga ithuluzi elincinci. Oku akuyi kuba yingxaki kwixesha elizayo eliza kuluhluza i-robots webbhulethi kuba iyakwazi ukusebenzisa ukuqonda kwabo ukujongana naluphi na ukuguqulwa kwiindawo zabo ezijoliswe ngethuba lewebhu ngexesha elincinci okanye ukungena mntu.Ziza kudala ziza kudalwa ukuba zingekadalwa.
Inkulu kakhulu i-web scraper yi-Google kuba ishishini layo eliphambili liza kukhwela kwaye lihlatyelele iiwebhsayithi kwaye liyakhupha zonke iiwebhsayithi ezithathiweyo. zonke izixhumanisi. Oku kulandela ukuba iGoogle ingaqala ukunikezela ngeenkonzo ze-web scraping. Yaye ukuba yenza, iya kuba yona nto inkulu kunye neyona nto ibhetele kwi-web scraping nkampani kuba ivele iqhambela iwebhu. Abaxhasi baya kufuna kuphela ukuluhlu ii-URL zamaphepha ewebhu ekujoliswe kuwo, kwaye baya kufumana yonke into abayifunayo kwi-Google. Emva koko, umxholo wazo zonke iiwebhusayithi sele sele zisekelwe kwiinkcukacha zayo.
Esinye isizathu sokuba i-Google iqale ukunikela iinkonzo ze-web scraping kukuba kuya kufuna into encinci okanye akukho mzamo yokongeza ukubulala kunye nayo. Inkampani iphila ngo- ukukhangela amawebhusayithi sele sele. Ukuba nedatha efunekayo ngesandla sonke iyakwenza iGoogle inikeze i-web yokutshintsha ixesha lokuguqula abanye ababoneleli ngeenkonzo abaze bakwazi ukufana.
Njengoko i-Google iza kunika inkonzo ngaphandle kwemigudu eyongezelelweyo, inokubonelela ngamanani okukhuphisana angabikho omnye umbutho onokulingana. Kanye nje ngendlela inkampani eye ithathe ngayo inzululwazi kwi-injini ye-injini, i-Google ingagcina iqela i-web scraping sector. Iingxaki zikulungele.
Ukususela ekuhlaleni nasekubonweni kwintlangano
Kungakhathaliseki ukuba zibiza kangakanani, izicathulo zingenamsebenzi kumntu ongenamilenze. Ngoko, idatha ayinakusetyenziswa kakhulu kumbutho onobuchule bokuhlalutya. Enyanisweni, idatha ngokwayo ayibalulekanga kakhulu, yindlela ongayisebenzisa ngayo. Ngoko ke, njengoko iinkampani ziyaqhubeka nokuqinisa imizamo yabo yokutsala i-web, ziya kuqalisa ukuchitha ezinye izixhobo ekuqeshweni abahlalutyi beenkcukacha ezinamava okanye ukuqeqesha abasebenzi babo kwinkqubo yedatha, kunye nokuhlaziywa kwedatha.
Ukunikezelwa kwedatha efanayo, iminye imibutho izakusebenzisa kangcono ngaphezu kwabanye. Oku kungenxa yokuba banabantu abanezakhono zokuhlalutya idatha. Ngoko, ikusasa le-web scraping liyakuchukumisa ngokuqinisekileyo imfuno yenkampani yedatha kunye nohlalutyo.
Uninzi lwezixhobo zokutsala iwebhu alunakusebenza kakuhle njengoko imibutho engaphezulu iya kuqhubeka nokwandisa imizamo yokwenza ukuba iiwebhusayithi zazo zingenakwenzeka.Ngelo xesha, kuphela iinkampani ezisetyenziselwa iinkonzo ze-web scraping okanye ezinye eziye zasebenzisa isixhobo esinamandla kakhulu ziya kukwazi ukukhangela idatha kwezinye iwebhusayithi.
Ekugqibeleni, kubalulekile ukuba imibutho iqale ukuzimisela ikusasa le-web scraping. Amanye amanyathelo afanelekileyo onokufuna ukuwaqwalasela yile:
1. Kufuneka uqale ukusebenzela ekuphuhliseni iiprobhothi zakho ezizenzekelayo eziza kusebenza .
2. Kufuneka ukhuthaze iinzame ekwenzeni ukuba indawo yakho inzima kakhulu. Kuthekani ukuba abanye abakhuphiswano bakho banokufikelela okulula kumxholo kwiwebhusayithi yakho ngelixa ungeke ukwazi ukukrazula? Khumbula, ulwazi oluthe xa unakho malunga nabaqhubi bakho, liphakamisa amathuba akho wokubayisa.
3. Kufuneka uqale usebenze ngokubalulekileyo ekuphuculeni umgangatho wakho wolwazi kunye nokuhlalutya izakhono. Oku kunokufaniswa neemeko zemfazwe. Ngamanye amaxesha, unokukhubeka ngolwazi olukhompyutheni lwabaphangi bakho okanye abachasi. Ingcaciso ayiyi kuba ncedo ukuba awukwazi ukuyikhetha ngokukhawuleza. Abahlalutyi beenkcukacha ngokubanzi bafumana amanqaku athile kwi-data edibeneyo ukuze kube lula ukuba uqeshe isibini.
Ngokucacileyo, ukwazi ukulungiselela umbutho wakho ngenjongo yedatha enkulu kunye nekamva le-extraction web kuzodlala indima ebalulekileyo ekuphumeleleni kwexesha elide lakho shishini Source .